प्रदीपलाई चोरीको बात
अर्काको सिर्जना चोर्न नेपाली फिल्म मेकर सिपालु छन् । अरुले अथाह मेहेनतले सिर्जना गरेको दृश्य लाजै नमानी चोर्छन् । जब चोरमाथि प्रश्न उठ्छ, ‘संयोगले मिलेको’ जाफ दिन्छन् ।
बैशाख अन्तिम पुग्यो ‘जात्रैजात्रा’
मोटरसाइकल दुर्घटनामा अभिनेता विपिन कार्कीको दायाँ खुट्टा फ्याक्चर भएपछि ‘जात्रा’को सिक्वेल ‘जात्रैजात्रा’ घोषित मिति फागुन १७ बाट सरेर अर्को वर्षको बैशाख अन्तिम पुगेको छ ।
बलिउडमा यसरी सुटिङ गरिन्छ यस्ता खाले दृश्यहरु
१. सन् २०१५ मा आएको हिट फिल्म ‘एक पहेली लिला’ मा सन्नी लियोनले केही इन्टिमेट सिन दिएकी थिइन् । तर, फिल्ममा उक्त इन्टिमेट सिन को–एक्टर रजनीश दुग्गलसँग भने दिएकी थिइनन् । उक्त दृश्यमा उनले आफ्नो पति ड्यानियल बेबर बेबरसँग रोमान्स गरेकी थिइन् ।
जब ऐश्वर्यालाई विवेकले यस्तो व्यवहार गर्न थाले...
बिहे गरेर पनि किन श्रीमानको घर जान पाइनन् रेखा ?
जानी नजानीको टाइटल गित ‘जानी नजानी’ सार्वजनिक
काठमाडौँ । चैत १ गतेबाट सार्वजनिक हुने चलचित्र ‘जानी नजानी’ को टाइटल गीत सार्वजनिक भएको छ। मोदनाथ खनालको शब्द तथा चर्चित गायिका अन्जु पन्त र गायक प्रताप दासको सुमधुर आवाज रहेको यस गीतमा संगीतकार अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको छ । प्रविन सिंहले कोरियोग्राफी गरेको यस भिडियोलाइ बसन्त अधिकारिले निर्देशन गरेका छन् ।
अर्जुन–मलाइकाको विहेको कुरा कति सत्य ? यस्तो छ मलाइकाको भनाइ
काठमाडौं । अभिनेता अर्जुन कपूर र अभिनेत्री तथा डान्सर मलाइका आरोडा बी–टाउनको प्रख्यात जोडी हो । पछिल्लो समय यो जोडी आउटिङ्गको क्यामेरामा सँधै कैद हुँदै आएका छन् । यो जोडीले यसै वर्ष वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।
चर्चीत अभिनेत्रीहरु जसले आफ्नो नाकको प्लाष्टिक सर्जरी गरे
बलिउड– सुन्दर हुन बलिउड अभिनेत्रीहरु हरेक हर्कत अपनाउने गर्छन् । पछिल्लो समय प्लाष्टिक सर्जरी गरेर सुन्दरतामा निखार थप्ने काम केही बलिउड अभिनेत्रीहरुले गरेका छन् ।
जब यी बलिउड कलाकारले यस्तो अजबगजबको हर्कत गरे
एजेन्सी । बलिउडमा अफयेरको कुरा चल्नु कुनै नौलो कुरा होइन । तर केही सम्बन्धहरु यस्ता छन् जसले सबै फ्यानहरुलाई अचम्ममा पारेका छन् ।
पूर्व पोर्नस्टारर् सनी लियोनी भन्छिन्, ‘१८ वर्षकी हुँदासम्म केटाप्रति रुचि थिएन’
मुम्बई । पोर्नस्टारर् हुँदै बलिउडमा प्रबेश गरेकी सनी लियोनीले आफू १८ वर्षको हुँदासम्म केटाहरुप्रति कुनै रुचि नभएको बताएकी छन् ।